Ukugaywa kwetalente kunye noqeqesho- Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Ukugaywa kweTalente noQeqesho
Nceda uthumele i-resume yakho kwi: Service @ runbo.net Ibonisa indawo:
Inkonzo yaBathengi kwi-Intanethi:
Ukugxila kunxibelelwano lwexesha lokwenyani kwi-Intanethi ukuququzelela isivumelwano soku-odola
2.Ukusebenzisa iindlela ezininzi zenkonzo ukukhonza ngokuthe ngqo abasebenzisi kunye nokusombulula ingxaki yabasebenzisi usebenzisa iimveliso.
3. Ukuqokelela iimfuno zabasebenzisi, ukunceda isebe ngalinye ukuba liphucule imisebenzi yeemveliso kunye nokugqiba ukuthengisa.
4. Ukusingatha izikhalazo zabathengi kunye nokwandisa ukunamathela kwabathengi.
5. Ukuhlalutya idatha yomsebenzisi kunye nokuSombulula izisombululo zokusebenza.
6.Ukuvumelana nenkqubo yokusebenza kweeshifti.
1. Isantya sokuchwetheza kufuneka sibe ngaphezulu kwamagama angama-80 / min (ukumamela kunye nokuchwetheza)
2. Ukuthanda i-Intanethi kunye nokuba nolwazi olusisiseko kusetyenziso lwenethiwekhi.
3. Isidanga sekholeji okanye ngaphezulu, ikhompyuter, i-e-commerce, njl njl.
4. Ukuthanda ukunxibelelana nabantu kunye nokuthwala uxinzelelo lonxibelelwano
5. Kukhethwa amava okusebenza okuNxulumene nabaThengi.
Iimfuno zoMgangatho woMntu:
1. Isakhono esihle sokusingatha imicimbi kunye nokufunda ulwazi olutsha;
2. Kukulunga ukumamela, ukuqonda kunye nokuqonda inkonzo;
3. Ukujonga iinkcukacha, ukubanakho ukuba namandla okufunda kunye nokuziphatha.
4. Ukuba nomoya olungileyo weqela, ukuziqhelanisa nendawo yokusebenza ngokukhawuleza;
5. Umzi mveliso wothando nokuqonda ixabiso lenkonzo.
1. Uxanduva lokubhala zonke iintlobo zamanqaku, izimvo, izixhobo zokwazisa uluntu kunye nezishwankathelo zewebhusayithi
2. Uxanduva lokuqokelela izixhobo zewebhusayithi, ukubhala ngesandla kunye
Ukuphononongwa kwakhona kwitekisi kamva, ukuqinisekiswa kunye neminye imisebenzi:
3. Ukuthatha inxaxheba kuphuhliso, ekuphunyezweni nasekubekweni kweliso kwizicwangciso zokukhuthazwa kwewebhusayithi kunye nezicwangciso.
1. Eyona nto iphambili kubuntatheli, kunxibelelwano, eTshayina, kuqoqosho nakulawulo, kunye nemvelaphi yemfundo kufanele ukuba ibe sisidanga sokuqala okanye ngaphezulu.
2. Yiba noxanduva lokuqokelela izixhobo zewebhusayithi, ukubhala ngesandla kunye nokubhalwa kwakhona kwamanqaku kamva, ukungqinisisa, njl.
3. Ukuziqhelanisa neendlela zobungcali, ukucinga ngokukhawuleza, ukuqonda okunamandla, izakhono zokubhala eziqinileyo, amandla okuthetha ngolwimi.
4.Ukwazi ukubhala ikopi yokunyusa ngokuzimeleyo,
ngamava asebenzayo kwiwebhusayithi nakwimagazini.
Landela umkhombandlela wophuhliso lobuchule benkampani yeAKF, Bambelela kwiimfuno zophuhliso lweshishini, Uhlalutya isithuba sokwazi ukuhambelana nomsebenzi kunye neendlela ezahlukeneyo zophuhliso lwabasebenzi, ukwakha inkqubo yoqeqesho lwabasebenzi ukuxhasa ngokukhawuleza uphuhliso lweshishini, kunye nokunceda ukukhula kwamakhondo omsebenzi ngokudibanisa uqeqesho lwe-mufti-dimensional.
Ukuqulunqwa kwamanyathelo olawulo kwimfundo noqeqesho lwabasebenzi, kunye nokwenza inkqubo ecwangcisiweyo, esemgangathweni kunye nolawulo lwenzululwazi yemfundo noqeqesho lwabasebenzi. Ukumisela ngokungqongqo ukurhoxiswa kunye nokusetyenziswa kweemali zoqeqesho ngokwemigaqo. Iimali zoqeqesho nezixhobo zisetyenziswa ngokufanelekileyo nangokufezekileyo. Imfundo noqeqesho lwabasebenzi luthathwa njengokuziphatha kwenkampani, kwaye inkampani ikhuliselwa kumbutho ofundayo.
Ukwandisa amajelo oqeqesho lweetalente ukuhlangabezana neemfuno zokuqhubeka nokufunda kweetalente zobugcisa nezobuchwephesha, kunye nokubonelela ngenkxaso yobukrelekrele kuphuhliso lwabasebenzi lokufezekiswa kweenjongo zophuhliso lweempawu zeAKF.
Inkqubo ecwangcisiweyo nebanzi, ukubeka uxinzelelo kumanqaku aphambili:
Ukugxininisa ekukhuliseni iitalente ezikumgangatho ophezulu kunye neetalente ezintsha. Inkampu yoqeqesho yamkelwe ukuhlakulela kunye nokwakha italente yangaphakathi efanelekileyo.
Ukuvala ishishini, Ukunika ingqalelo kwiziphumo, uqeqesho lwabasebenzi kufutshane nesicwangciso senkampani, Ukugxininisa kwinkxaso yoqeqesho lweshishini lenkampani, Ukudibanisa ithiyori kunye nokuziqhelanisa, Ukugxila kwisicelo kunye nesiphumo.
Ulwakhiwo lweetalente ezigciniweyo: Uqeqesho lwaBasebenzi oluBanzi
Uqeqesho lweetalente zobungcali: Uluhlu lweetalente eligciniweyo lolawulo olusisiseko
Igumbi leetalente eligciniweyo lolawulo oluphakathi
IChibi leTalente eligciniwe kuLawulo lwaBadala
Indlela yophuhliso lobugcisa:
Indlela yoPhuhliso lweMisebenzi:
Umthengisi oPhakamileyo umthengisi oPhakathi umthengisi omncinci Umsebenzi othengisa rhoqo
Indlela yolawulo lomsebenzi wokuphatha: USekela Manejala Jikelele USekela Mongameli weziko / uMhloli oyiNtloko weNgingqi / uMlawuli oyiNtloko Umphathi oGciniweyo oGciniweyo